Wepu mmiri dị na gas. Biko kpoo ihe ndi puru iche.
Biko hota ngwa a dika oyuyo na ihe injinia.
Equipmentdị ngwaọrụ nhicha gas,
Ihe ndị anyị chọrọ na ụkpụrụ pụrụ iche, biko mee ka anyị mara.
Onye nchedo nrụgide dị mma na nke na-adịghị mma
Nkọwa dịka usoro ọnọdụ dị adị, a na-ekewa ihe ahụ na carbon steel na enamel. Nkọwa nke onye na-ahụ maka nrụgide dị mma na nke na-adịghị mma Site na tankị, ala nke mmiri, ọkpọkọ ikuku, ọkpọkọ mgbali, na nbudata, gụnyere tankị nwere ike ikewapụ ya na pipeline dabere na oke olu, mmiri ntụtụ mgbe ọ kwesịrị, mgbe nrụgide gas karịrị ike ikuku ikuku nke ọkọlọtọ. kariri 4 kpa ma ọ bụ karịa ikuku ikuku nkịtị ka erughị 0,5 kpa, em ...
Mmanụ na-eme ka mmanụ dị elu ma na-eme ka ihe kwụsie ike
A na-ejikarị ya iji mee ka nrụgide gas na-agbaso ụkpụrụ, na-enwe nrụgide kwụsiri ike, yana na-eweta ya. Ọ bụ njirimara bụ nchekwa, ụgbọ njem dị mfe ma dịkwa mfe maka nrụnye, nrụgide gas kwụsiri ike, akụrụngwa njikwa akpaka. Usoro nrụgide na usoro nrụgide nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara ma mepụta bụ nke a na-eji maka nrụgide methane, nrụgide nrụgide na ọkọnọ gas.
Enwere ike ekewa ya na ihe enamel na ihe igwe anaghị agba nchara. Maka ọdịnaya biogas dị iche iche na mmepụta biogas, a na-ahọrọ ụdị dị iche iche.
Ngwa nchekwa iji kpuchido nchekwa nke akụrụngwa gbochie ọnọdụ mberede; biko hapu ozi ma oburu na inwere ihe ndi puru iche.
Nkọwapụta dịka ọnọdụ ahaziri ahazi, ka agwaa nke carbon steel na ihe enamel. Okwu mmeghe 1. Ejiri ezigbo mkpa nke iji biogas mee ihe, ọ na-ebu nkụchasị nke akpịrị, akpịrị ịkpọ nkụ na ọgwụgwọ ọcha nke biogas. Ihe a bụ usoro nkụchapu akpọnwụ akpọnwụ, nke ọ bụghị naanị na - enwe mmetụta dị elu nke nkụda mmụọ na nkụda mmụọ, mana ọ na - emekwa ka usoro sistemụ ahụ dị mfe, njikwa kwa ụbọchị dị mma ma na - arụ ọrụ cos ...
Items Items Ihe ndị na-ekwu okwu
100 kubik mita biogas Torch Set
Gburugburu ọgụ ọkụ nke methane: 100m3 / h
Ọdịda mmiri methane: ≤6%
Ọdịnaya methane: ≥35% -55% (Site na ọdịnaya methane ruru 55%, ọwa na-ere ihe ruru 100m cubed kwa elekere)
Ihe ndị na-enye hydrogen sulfide: ≤50ppm
Ihe ndị mebere arụ ọrụ: ≤0.2%
Mgbapụta mmanụ mmanụ ga-erughị DN40 (n'okpuru ọnọdụ nrụgide nke 3kpa).
Igwe ihe eji esi mmiri
Biogas, akụrụngwa nsị mmiri. Okwu mmeghe: springs extrusion type solid-fluid separator is based in main engine, non-clogging pump, pump office, pipeline and other qalabka.The akụkụ nke usu organism, ntupu ihu igwe, extrusion stranding, motor vibration, motor deceleration, weight, unloading ngwaọrụ.Its na-arụ ọrụ bụ dị ka ndị a: mgbapụta na-enweghị mkpọchi na-enweghị mgbapụta slurry n'ime ahụ, moto blanking na-agba ọsọ, n'okpuru ọrụ nke nnyefe ike, na-agbanye g ...